Ilizwe lokubalekela emaphandleni kwindawo eguquliweyo yaseGeorgia
Church Stoke, Wales, United Kingdom
Uvimba sinombuki zindwendwe onguAlison
'I-Cwtch' (igama lesi-Welsh lehug) yindawo eguquliweyo yaseGeorgia, yalungiswa yayindawo ephezulu yesitudiyo kumaphandle asePowys. Iisilingi eziphakamileyo zibonisa iiplanga eziveziweyo zokhuni, ezinconywa ngamatye asekuqaleni. Umnyango wangaphambili uvula indawo yokuhlala ebandakanya ibhedi yesofa etofotofo, itafile yesidlo sakusasa, iTV kunye neWifi. Indawo yokulala ibandakanya ibhedi ephindwe kabini kunye nokugcinwa okuninzi. Ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela zisanda kufakwa. Indawo yegadi efihlakeleyo ibandakanya indawo yokuhlala yangaphandle kunye neyokupaka.
I-Cwtch ikwindawo yegadi yaseLaurels Cottage. Yindawo yestudio yeendwendwe yabucala, ezimeleyo, enendawo yayo yokupaka, indawo yokuhlala yangaphandle kunye nokufikelela kumnyango wangaphambili. Indawo yegadi efihlakeleyo efumanekayo ikhuselekile kwaye iyazenzela nto leyo eyenza ukuba igqibelele kuzo naziphi na izilwanyana zasekhaya eziziphethe kakuhle.
I-Cwtch ikwindawo enoxolo nefama kumda wePowys/Shropshire. Sikonwabela ukuhamba okumangalisayo kwasekhaya okunje nge-Offa's Dyke kunye ne-Long Mynd kwii-Shropshire Hills. I-Montgomery kunye namabhodlo enqaba yimizuzu eyi-10 yokuqhuba. Inqaba yasePowys kunye neegadi ezidityanisiweyo kukuhamba ngemizuzu engama-20. Ungafikelela eLudlow ngaphakathi kwemizuzu engama-30, eyidolophu echumayo yentengiso yamaxesha aphakathi kunye negugu loyilo; ukubamba iminyhadala kunye neminyhadala unyaka wonke. Sikwanethamsanqa elaneleyo lokuba nentsimi yediliya yalapha kumgama ozimayile ezantsi kwendlela, enekhefi yaso kunye nokhenketho lokungcamla!
Indawo yethu yokuhlala ikufuphi neCwtch, kodwa yahlukile kwaye kwabelwana ngayo kuphela kwindlela yokuqhuba. Siza kukwamkela kwaye siyaqhagamshelwa kulo lonke iindwendwe ezihlalayo ukuze sifumane uncedo ngazo naziphi na iingcebiso kunye nemibuzo.
Indawo yethu yokuhlala ikufuphi neCwtch, kodwa yahlukile kwaye kwabelwana ngayo kuphela kwindlela yokuqhuba. Siza kukwamkela kwaye siyaqhagamshelwa kulo lonke iindwendwe ezihlalayo…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Church Stoke